Filaminam-baovao | NewsMada
Vaovao ny taona, vaovao ny Filoham-pirenena, ho vaovao ny governemanta… Miandrandra zava-baovao amin’ny lafiny rehetra ny Malagasy. Raha ny eo amin’ny fandriampahalemana fotsiny no horesahina, tena miandry mafy fomba fiasa vaovao, fepetra vaovao ny rehetra. Ekena fa vao manomboka ny taona, maro ny trangana tsy fandriampahalemana miseho na eto an-dRenivohitra na any ambanivohitra, na any amin’ny faritra. Izany indrindra no iandrasana paik’ady vaovao amin’ny fitondrana vaovao.
Maro ny tetik’ady natolotry ny Filoham-pirenena momba ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana tamin’ny fotoan-androny. Zava-dehibe tamin’ireny ny fampitaovana ny mpitandro filaminana. Andrasana fatratra izany, ary heverina fa ho laharam-pahamehana amin’ny programan’asan’ny Filoha sy ny governemanta ho avy eo.
Efa samy miventy daholo ny rehetra fa tsy hisy fampandrosoana vanona raha tsy misy ny fandriampahalemana. Miaina anaty filaminana ny vahoaka, ary afaka mamokatra sns.
Amin’ity ihany koa no heverina fa hisy politika mazava amin’ny ady atao amin’ny tsy fandriampahalemana. Tsy hisy ny vonjy tavan’andro na taitaitra fotsiny rehefa misy ny zava-mitranga. Ny zandary nanome tatitra farany teo fa maro ny fandikan-dalàna voarain’izy ireo tamin’iny taona lasa iny. Raha ny raharaha fakana an-keriny fotsiny, efa nahatratra 31 ny isany, nandritra ny taona 2018. Raha 2221 ny isan’ny fanafihan-dahalo ka 420 ny maty voatifitra. Zandary 64 ihany ny maty am-perinasa ary 18 maty tamin’ny fifandonana tamin’ny dahalo.
Iny taona 2018 iny, tena maro ny mpitandro filaminana maty. Mba hihena kosa izany amin’ity, na tsy hisy intsony ary hilamina ny tany.
Miandry filaminam-baovao ny vahoaka, manomboka izao. Hisy fiantraikany amin’ny fiainany andavanandro mihitsy izany. Ka miandry izany ny rehetra ary…